Aqalka hoose oo kulankii 1-aad yeelanaya 16 cisho kadib | KEYDMEDIA ENGLISH
Aqalka hoose oo kulankii 1-aad yeelanaya 16 cisho kadib
Baarlamaanka 11-aad, waxaa laga sugayaa shaqooyin xooggan, iyadoo la xasuusan yahay in habkii ay inta badan xubnaha Golayaashu kuraasta Baarlamaan ku soo heleen, siyaasadaha ay u kala taagan yihiin iyo shaqsiyaadka ay ku ra’yiga yihiin.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka 11-aad ee JFS, ayaa maanta yeelanaya kulankoodii caadiga ahaa, 16 maalin kadib, doorashadii Madaxweynaha 10-aad, taasoo dhacday 15 May 2022.
Xildhibaannada ayaa fasax galay, kadib soo af-meeriddii doorashada, waxayna maanta dib ugu laabanayaan xaruntooda KMG ee Villa Hargeysa, xilli ajandaha kulanku yahay Akhrinta xeer hoosaadka Golaha shacabka.
Inkastoo Guddoonka Golaha uu diray farriinta isku soo laabashada, haddana Keydmedia Online, ayaa fahansan in Xildhibaanno badan ku maqan yihiin dalka dibaddiisa, mana la filayo in guntanka maanta noqdo mid xooggan.
Baarlamaanka 11-aad, waxaa laga sugayaa shaqooyin xooggan, iyadoo la xasuusan yahay hannaankii ay inta badan xubnaha Golayaashu kuraasta Baarlamaan ku soo heleen, siyaasadaha ay u kala taagan yihiin iyo shaqsiyaadka ay ku ra’yiga yihiin.
Kulankaan ayaa noqon doona kulankii ugu horreeyay ee 12-kii sano ee la soo dhaafay qabsooma, Mahad Maxamed Salaad, oo aan Xildhibaan ahayn, kaasoo lumiyay xubinnimadiisiii Golaha Shacabka, kadib markii loo magacaabay Taliyaha NISA.